Sintomy ireo boky 569 navoakan'ny Metropolitan Museum of Art | Famoronana an-tserasera
Isaky ny mampakatra atiny an-tserasera maimaimpoana avy amin'ny tranombakoka lehibe, dia mitsiky ny tarehinay. Afaka miditra Boky kanto maimaimpoana 569 avy amin'ny atiny fa ny Metropolitan Museum of Art any New York dia nandamina an-tserasera dia hetsika iray izany.
Ara-drariny izany tamin'ny herintaona rehefa afaka niditra a Bokin-javakanto 422 avy ao amin'ny Museum of Art Metropolitan ihany any New York, Ka noho izany daty lehibe izany dia azonao atao ny mandeha misintona ireo boky ireo hampiasa azy ireo araka ny itiavanao azy.
Andro vitsy lasa izay dia ny Art Institute of Chicago ny zava-misy natao ampahany amin'ny fanangonana azony an-tserasera. Ankehitriny izahay dia mandeha amin'ireo boky kanto 569 ireo raha te hiala amin'ny sary hosodoko impressionista an'ny artista amerikana ka hatramin'ny zavakanto aziatika taloha.
Afaka miditra amin'izany afa-po maimaimpoana mila fotsiny ianao omeo ity rohy ity. Avy eo isika dia tsy maintsy mikaroka amin'ny lohateny, mpanoratra, fanangonana, karazany ary lohahevitra. Azonao atao ny misintona azy ireo amin'ny PDF na mamaky azy ireo amin'ny Internet mba hahamora anao.
Ny iray amin'ireo hevitr'izy ireo dia ny fananan'izy ireo hevitra avy amin'ireo mpampiasa hafa izay miaraka aminy afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa amin'ny manam-pahaizana manokana ianao na olona mahay ao amin'ny tontolon'ny zavakanto. Azonao atao koa ny manaraka ny pejy Facebook an'ny Metropolitan Museum of Art toy ny ny instagram mba haharaka hatrany ny karazana hetsika na vaovao mifandraika amin'ny kanto.
matetika havaozy ny atiny an-tserasera mandritra ny taona, ka raha te hitandrina ny zavatra avoakany rehetra ianao dia aza hadino izany rohy izany. Izy io koa dia fomba tsara hidirana amin'ny fampirantiana, sary ary fotoana tsy azo raisina amin'ny fiainana andavanandro an'ny tranom-bakoka tahaka izany.
Avy amin'ny pejinao Facebook afaka fantatrao ny fampirantiany manaraka, ny ora malaza indrindra sy ny ora an'ny tranombakoka. Fihaonana tsy azo lavina raha mandalo ny tanànan'i New York ianao amin'ireo daty ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Boky zavakanto maimaimpoana 569 misy amin'ny Internet avy ao amin'ny Metropolitan Museum of Art